Ilyaas Gaboose oo noqday Senator-kii ugu horeeyay oo la doorto | KEYDMEDIA ONLINE
Ilyaas Gaboose oo noqday Senator-kii ugu horeeyay oo la doorto
Waxuu ahaa siyaasi kasoo mid noqday Dowladda C/llaahi Yuusuf, isagoo la sheegay inuu xriiri dhaw la leeyahay Axmed Madoobe oo usoo noqday gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose.
KISMAAYO, Soomaaliya - Ilyaas Badal Gaboose ayaa noqday Senator-kii ugu horeeyay oo loo doortay Aqalka Sare ee cusub, iyadoo Jubaland oo ahayd meesha ugu khilaafka badan doorashada ay billowday codbixinta.
Ilyaas waxaa la tartamay Maxamed Axmed Sayid, oo ahaa Musharax maqaar-saar ah, iyadoo uu jiray Shaqsi 3aad oo kula qornaa Kursigan kaasoo isaga haray tartanka.
Musharax Ilyaas Badal ayaa helay 55 cod, halka Maxamed uu ku guuleystay 17 cod, waxaana hallaabay hal cod, oo kamid ah 73 Xildhibaan oo codeysay.
Waxaa hadda la guda galayaa doorashada Kursiga 2aad, iyadoo maanta Jubbaland ay dooranayso afar kursi, oo kamid ah 8 Kursi oo ay ka heshay Aqalka Sare.